महत्वपुर्ण पर्यटकीय क्षेत्र र कृषिको लागि उर्वर भूमीको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने छौ : अध्यक्ष चौधरी – Online Bussiness Khabar
२०७७ पुष २, बिहीबार ०८:४१
विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसंग जुधिरहेको छ । यसले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । कोरोनाको अवस्था घट्दोभन्दा पनि बढ्दो चरणमा रहेकोले अब कोरोनाको त्रासले हात बाँधेर बस्नुभन्दा पनि कोरोना संगसंगै अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर सुरक्षाका विभिन्न उपाय र मापदण्ड अपनाएर समग्र गाउपालिकाका गतिविधीलाई सरावल गाउँपालिकाले अगाडी बढाएको छ । गाउँको विकासका लागि गरिएका काम, त्यसको प्रभावका विषयमा सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीसंग अनलाईन बिजनेश खबरकर्मी उमाकान्त चापागाईले गरेको कुरा कानी । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरावल गाउँपालिका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी
यतिबेला मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । सरावल गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
हो, मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण समस्यामा परेको छ । तर सरावल गाँउपालिका अहिले कोभिड–१९ मुक्त गाँउपालिका भएको छ सुरुका दिनमा चीन, भारत लगाएतका देशमा कोरोना देखिन थालेदेखि नै हामीले सर्तकता अपनाएका थियौं खुल्ला सीमा भएका कारण भारतबाट सहजै रुपमा नेपाल छिर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यही हिसाबले सावधानी अपनाउने देखि लिएर लक्षणका विषयमा सचेत बनाउँदै हिडिरहेका थियौं । यसको संक्रमणलाई फैलिन नदिन सरकारले विभिन्न सुरक्षाका उपायहरुको अवलम्वन गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । हामी पनि यो विषयमा सचेत भयौ तर यो कोरोना महामारीको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने अवस्था नदेखिएकोले सचेतता अपनाउदै नियमित कामलाई पनि गति दिनुपर्छ भन्ने लागेर सोही अनुसार अगाडी बढेका छौं
कोरोना रोकथाम र यसबाट सृजित समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न कस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको छ ?
पहिला त हामीले गाउँबासीलाई सचेत गराउने अभियानसंगै राहत वितरण कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्यौ । तर, यतिका लामो समयसम्म पनि संक्रमणको अवस्था घट्नेभन्दा पनि बढ्दो क्रममा रहेकोले अब सर्वसाधारण जनताहरु पनि घरमै बस्दा थप समस्या आउन सक्ने भएकोले विभिन्न ब्यापार व्यावसायका साथै निर्माणका क्षेत्रहरुमा खट्ने मजदुर एवं कामदारहरुलाई आफु सुरक्षित भएर काम गर्न आग्रह गरेका छौं । र सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ ।
भारत तथा अन्य देशबाट आएका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?
भारत तथा अन्य देशबाट आएका नेपाली नागरिकलाई हामीले गाँउपालिका भित्र निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमा राखेर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्यौ । सुरुमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्न समस्या आयो । पछि राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय बासी लगायत सबैसंग छलफल गर्यौ त्यसपछि क्वारेन्टिन निर्माणमा सहमति जुटेको थियो । साथै हामीले सामाजिक दुरी, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगका विषयमा पनि सचेत गराउँदै प्रयोग गर्न पनि सिकायौ ।
गाउँको विकासका लागि के–के काम गर्नुभएको छ ?
समग्र गाउ विकासको लागि योजना बनाएर अगाडी बढेका छौं । गाउँपालिकामा रहेका महत्वपुर्ण पर्यटकीय क्षेत्र र कृषिको लागि उर्वर भूमीको पहिचान गरेर अहिले सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं ।
पुर्वाधार विकासको कुरा गर्दा हामीले पहिलो खुड्किलानै पुर्वाधार भएकोले सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं । सडक चौडा गर्नुका साथै नयाँ ट्रयाकको निर्माण संगसंगै विभिन्न संघसंस्थाको लागि आवश्यक पर्ने भवनको निर्माण कार्यका साथै मर्मत सम्भारको कामसमेत भइरहेको छ ।
म यहाँको अनलाईनमार्फत के भन्न चाहन्छु भने
विकासको लागि सबैले हातेमालो गरेर अगाडी बढौं, सबैको चाहना राम्रो गर्ने हो । विकास एक्लैले गरेर सम्भव हुने कुरा पनि होइन । हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, अहिलेको यो कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौं सबै जिम्मेबार बनौ भन्न चाहन्छु ।